Tallaalka COVID ee ugu wanaagsan adduunka ayaa bilaash loogu heli karaa dalxiisayaasha Mareykanka iyo kuwa caalamiga ah ee Hawaii
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Tallaalka COVID ee ugu wanaagsan adduunka ayaa bilaash loogu heli karaa dalxiisayaasha Mareykanka iyo kuwa caalamiga ah ee Hawaii
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Wuxuu Jecel Yahay Dhimista Dukaameysiga Maandooriyaha
Booqdayaasha Hawaii waxay bixiyaan $ 15.00 + canshuur iyo talooyin loogu talagalay Mai Tai. Tallaalka COVID, si kastaba ha ahaatee, waa bilaash oo wax talooyin ah lama aqbalo.
Dalxiisayaasha qaadanaya tallaalka Hawaii waxay helayaan qiimo dhimis dheeraad ah iyo hadiyado la siiyo tallaalka.
Dhammaan arrimahan waxaa xushmad u leh Gobolka Hawaii iyo cashuur bixiyayaasha Hawaii. Waxay marin habaabisaa tirakoobka tirada tallaalka COVID.
Ku dejinta dadweynaha nambarka beenta ah dabcan waxay gacan ka geysan kartaa dareen qaldan oo nabadgelyo iyo kororka caabuqyada iyo dhimashada.
Hawaii sida gobollo badan oo Mareykanka ah kuma qancin karto dhammaan dadka deggan inay iska tallaalaan COVID-19. Hadda waxay si aamusnaan ah u siiyaan dadka soo booqda tallaallo, waxaana jira sabab mugdi ah.
Cashuur-bixiyeyaasha Hawaii waxay ku casuumaan booqdayaasha hodanka ah ee hodanka ah inay helaan tallaalka COVID-19.
Guddoomiyaha Gobolka Hawaii Ige ayaa leh ayaa ku boorinayay dadka soo booqda inay gurigooda joogaan. Muxuu u sheegi waayay booqdayaasha dalxiiska tallaalka?
Dhowr bilood ka hor, Hawaii waxay diiwaangelisay 20-30 infekshanno cusub maalintii. Hadda oo ay dalxiisayaashu daadadku ku dhufteen gobolka, ku dhawaad ​​1,000 xaaladood oo cusub oo ah caabuqyada COVID-19 iyo dhimashada la diiwaangeliyay ayaa dalxiiska ka dhigaysa mid qosol leh.
Goobaha laga dukaameysto, hoteellada, iyo maqaayadaha ayaa dadku ku badan yihiin. Soojiidashada ayaa laga qaadaa khidmadaha gelitaanka saddex laab xaaladaha qaarkood waana mashquul. Ma jirto meel lagu seexdo shukumaan xeebta Waikiki, laakiin xannibaadda cusub ayaa marba marka ka dambaysa noqonaysa mid dhab ah, si kastaba ha ahaatee, maaha sida uu qabo Lt. Gov. Josh Green.
Gudoomiye Cige ayaa dhawaan ka codsaday dadka soo booqda inay ka fiirsadaan socdaalka ay ku tagayaan Aloha Gobol.
Isla mar ahaantaana, Dukaamada Daroogada ee Hawaii xayaysiisyada ka samee warbaahinta maxalliga ah iyo mareegaha si dadka loo tallaalo. Siinta tallaalada bilaashka ah waa ganacsi weyn iyaga oo dukaamada dawooyinka lacag la siinayo. Si ay dadku u helaan tallaallo lacag la'aan ah, dukaamo badan ayaa bixiya boonooyin wax iibsi oo qiimo jaban si ay hub ugu soo galaan bakhaarradooda. Gudaha Hawaii, tan waxaa ku jira booqdayaasha.
Waxaa jira tallaallo badan oo laga heli karo Maraykanka. Dawladaha ku tiirsan socdaalka iyo warshadaha dalxiiska sida Hawaii waxay helayaan hal -abuur si ay si fiican ugu eegaan tirakoobka tallaalka. Waxay u muuqataa inay tani noqon karto sababta Gobolka Hawaii uu durba u siinayo dalxiisayaasha.
Iyadoo duulimaadyo badan oo caalami ah oo aan joogsi lahayn oo ka yimid Aasiya kuna socday Hawaii ay dib u soo celiyeen, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, iyo ANA waxay dalxiisayaal u qaadayaan xeebaha bacaadka cad ee Aloha Gobol.
U safrida Hawaii ee Jabaaniyiinta ma aha allabari la'aan. Iyadoo aan loo eegin barta caalamiga ah ee asal ahaan, dhammaan safrayaasha soo galaya Japan waxay ku sii jiri doonaan a 14 maalmood oo karantiil ah markaad timaaddo waxaana laga mamnuucay isticmaalka gaadiidka dadweynaha si loogu daro duulimaadyada gudaha, tagaasida, iyo tareenka. Qof kasta oo ka soo laabanaya Hawaii wuxuu ku jiri doonaa karantiil gudaha Japan. Waa maxay sababta ay qaar Japanese yihiin wali u safraya xeebaha Hawaii?
Lambarada tallaalka dalal badan oo ay ku jirto Bariga Aasiya way hooseeyaan. Pfizer iyo Moderna ayaa ah kuwa ugu waxtarka badan uguna baahida yar tallaalka COVID-19. Labada tallaalba si xor ah lagama helo dalalka qaarkood. Muwaadiniinta dalal kale ayaa inta badan si aad ah ugu diyaar ah inay maalgashadaan kaydka noloshooda si ay u helaan tallaalka.
Kalkaaliso caafimaad oo ka tirsan Waikiki oo ka tirsan kalkaalisada bukaan -socod ee Daroogada Daroogada Daroogada, oo aan rabin in la magacaabo ayaa u sheegtay eTurboNews:
"Waxaan ku helnaa dalxiisayaal badan Daawooyinka Longs oo naga codsanaya inaan is tallaalno."
Halkee ka yimaadeen dalxiisayaasha tallaalka?
“Inta badan Jabaaniis, laakiin sidoo kale Kuuriya, iyo xitaa booqdayaasha Yurub oo codsanaya in la tallaalo. Waxaan haynaa shaqaale ku hadla Jabaaniis si ay u caawiyaan. Waxaan sidoo kale helnaa booqdayaasha gudaha oo codsanaya in dabcan la tallaalo. ”
Ma laguu oggol yahay inaad siiso tallaalka qof kasta oo codsada?
“Haa, ma takoorno. Waxaan weydiisaneynaa asal qowmiyadeed ujeedooyin tirakoob kaliya, laakiin ma weydiisaneyno dhalashada, heerka deganaanshaha, iwm. ”
Intee in le'eg ayay Daroogada Longs ka qaadi doontaa tallaalka kuwa martida ajnabiga ah ama dalxiisayaasha gobolka ka baxsan?
“Wax lacag ah kama qaadno. Waxaan dhab ahaan ku darnaa qiimo dhimis wax iibsi ama dhiirigelin qof kasta oo la tallaalayo. ”
Yaa bixinaya tallaalka?
"Gobolka Hawaii wuxuu na siinayaa tallaalka."
Waa maxay nooca tallaalka aad siiso booqdayaasha?
"Waxaan bixinnaa tallaalka ugu wanaagsan ee laga heli karo adduunka: Tallaalka COVID Pfizer ama Moderna."
Sidee buu Gobolku u ogaan doonaa inta aan ahayn dadka deegaanka ee qaata tallaalka?
“Gobolku ma weydiinayo halka ay macaamiisheena ka imaanayaan. Waxaan diiwaangelinnaa lambarka aqoonsiga, sida baasaboor, lambarka liisanka darawalnimada. Tan, waxaan ku dallacnaa Gobolka. ”
Miyaanay taasi sumaynaynin lambarka tallaalka ee uu soo tebiyey Gobolka Hawaii inuu u gudbiyo CDC?
“Waxaan u malaynayaa in Gobolku uusan garanayn cidda dadka la tallaalay ay yihiin dadka deggan iyo kuwa soo booqda. Waxa kaliya ee aan ka codsaneyno bukaanka waa in la siiyo tallaalka labaad 3-4 toddobaad kadib. Waxaan u malaynayaa inay tani ganacsi fiican u tahay hudheelada iyo hoteelada, makhaayadaha, iyo dhaqaalaheena. ”
Iyada oo ku saleysan tan, 71% tallaalka ugu horreeya ee tallaalka Hawaii, iyo in ka badan 51% heerka tallaalka oo buuxa ee Gobolka ayaa laga yaabaa inay khalad tahay.
Caalami ahaan oo kali ah, in ka badan 1,000 booqdeyaal ah ayaa Hawaii ku yimaada duulimaadyo aan joogsi lahayn maalin kasta. Dad badan oo soo booqdayaal caalami ah ayaa yimaada marka ay isku xiraan duulimaadyada maraya dhul weynaha Mareykanka.
Gudaha, Hawaii waxay lahayd in ka badan 20,000 oo maalin kasta yimaada maalin kasta tan iyo markii tallaalka si xor ah loo heli karo ballan la'aan.
Tani waxay fureysaa su'aalo badan.
Marka la daabaco lambarrada tallaalka ee khaldan, dadka Hawaii ma ka nugul yihiin sidii ay filayeen inay noqdaan?
Tani miyey sharxi doontaa sababta caabuqa Hawaii iyo heerka dhimashada ay u diiwaan gelinayaan diiwaanno cusub maalin kasta?
Maxay canshuur bixiyeyaasha Hawaii u bixin doonaan tallaalka? Dalxiisayaashu ma aha hoylaawe ama sabool. Haddii dalxiis ama diyaarad rabaan inay kaa caawiyaan bixinta - waa fiican. Iyada oo ay jiraan tiro aan tiro lahayn oo hoylaawe ah iyo dad aad u tiro badan oo ku nool darafka Hawaii, Gobolku wuxuu u baahan yahay dakhli si uu u daryeelo arrimaha bulsheed ee waaweyn.
Wadamo badan oo adduunka ah ayaa leh rikoor dillaacay COVID iyo dhimasho. Waxay u baahan yihiin tallaal degdeg ah. Muwaadiniintoodu ma awoodi karaan fasaxa Hawaii.
Halkii la siin lahaa tallaalka dalxiisayaasha hodanka ah, maxay Hawaii u soo saari weyday dakhli ka soo gala tallaalka oo ay ugu diri lahayd dalalka u baahan?
Waxba kama jiraan dalxiiska tallaalka. San Marino, Israel, iyo dalal kale oo dhowr ah ayaa leh warshado dalxiis tallaal oo soo kordhaya. Arrintu waa tirakoobidda sumcadda oo halis gelisa dadka deggan iyadoo la siinayo xaqiiqooyin aan sax ahayn, taas oo aan khalad ahayn oo keliya, laakiin laga yaabee dembiile.
Waxa ay Hawaii ku samaynayso tirooyin aad u tiro badan oo leh qarsoodi - waxqabadyadan waxaa si rasmi ah loogu dallacsiiyay oo loogu baahiyay Guam Gudiga Dalxiiska Guam.